Kufanotaura kweGartner kweTop 10 Technologies ye2011 | Martech Zone
Iko kuverenga kunonakidza Kufanotaura kwaGartner kwetekinoroji gumi dzepamusoro dze10… Uye mashandiro anoita zvese kushambadzira kwedigital. Kunyangwe kufambira mberi mukuchengetedza uye Hardware kuri kukanganisa kugona kwemakambani kudyidzana kana kugovana ruzivo nevatengi uye tarisiro nekukurumidza uye zvakanyanya.
Top Gumi Technologies yegore ra2011
Cloud Computing - Cloud komputa masevhisi aripo pamwe neakawanda kubva kune yakavhurika yeruzhinji kusvika yakavharwa zvakavanzika. Makore matatu anotevera achaona kuunzwa kwehuwandu hwerubatsiro rwegore nzira dzinowira pakati peaya maviri akanyanyisa. Vatengesi vachapa yakarongedzwa yakavanzika gore kuitisa iyo inounza iyo yevatengesi yeruzhinji gore sevhisi matekinoroji (software uye / kana Hardware) uye maitekisheni (kureva., Akanakisa maitiro ekuvaka uye kumhanyisa sevhisi) mune fomu inogona kuitiswa mukati mekambani yemutengi. Vazhinji vachapawo manejimendi masevhisi ekumusoro manejimendi sevhisi kuita. Gartner anotarisira makambani makuru kuti ave nechikwata chakasimba chekutsvagisa panzvimbo na2012 iyo inokonzeresa kuenderera mberi kwesarudzo yekushambadzira uye manejimendi.
Mobile Mapepa uye Media Mahwendefa - Gartner anofungidzira kuti panopera gore ra2010, 1.2 bhiriyoni vanhu vachatakura nharembozha dzinokwanisa kupfuma, nhare yekutengesa ichipa nharaunda yakakodzera yekubatana kwekufamba uye neWebhu. Nhare mbozha dziri kuve makomputa pachavo, ine huwandu hunoshamisa hwekugadzirisa kugona uye bandwidth. Kune mamwe mazana ezviuru zvekushandisa kwemapuratifomu seApple iPhone, kunyangwe paine musika wakashomeka (chete wepuratifomu imwe) uye kuda kwekunyoresa kwakasarudzika.
Hunhu hwechiitiko chekushandisa pane izvi zvishandiso, izvo zvinogona kuisa nzvimbo, kufamba uye imwe mamiriro mune maitiro avo, iri kutungamira vatengi kusangana pamwe nemakambani zvakasarudzika kuburikidza nharembozha. Izvi zvave kutungamira kumakwikwi kukwikwidza kunze kunyorera seyikwikwidzi chishandiso chekuvandudza hukama uye kuwana mukana pamusoro pevakwikwidzi vane nzvimbo dzadzo dzakangoita browser-based.
Zvemagariro Kutaurirana uye Kubatana - Zvemagariro enhau zvinogona kukamurwa kuita izvi: (1) Zvemagariro pasocial network - zvigadzirwa zvemagariro, zvakadai seMySpace, Facebook, LinkedIn uye Friendster pamwe nehunyanzvi hwekudyidzana (SNA) matekinoroji anoshandisa algorithms kuti anzwisise uye ashandise hukama hwevanhu pakuwanikwa. yevanhu uye hunyanzvi. (2) Kubatana munharaunda - matekinoroji, senge wikis, mablog, kutumira mameseji chiriporipotyo, hofisi yekudyidzana, uye kuwanda kwevanhu. (3) Kudhindisa pasocial - matekinoroji anobatsira nharaunda mukubatanidza zvemukati zvemunhu munzvimbo inoshandisika uye munharaunda inowanika dura senge Youtube uye flickr. (4) Zvemagariro mhinduro - kuwana mhinduro uye maonero kubva munharaunda maererano nezvimwe zvinhu sezvakaonekwa paYouTube, flickr, Digg, Del.icio.us, uye Amazon. Gartner anofungidzira kuti panosvika 2016, zvemagariro matekinoroji zvichange zvichisanganiswa nemazhinji mabhizinesi ekushandisa. Makambani anofanirwa kuunza pamwechete yavo CRM yenharaunda, zvemukati kutaurirana uye kubatana, uye neruzhinji ruzhinji saiti saiti matanho mune yakarongedzwa zano.
Video - Vhidhiyo haisi fomu nyowani yemidhiya, asi mashandisiro ayo seyakajairwa mhando midhiya inoshandiswa mumakambani asiri enhau ari kuwedzera nekukurumidza. Tekinoroji mafambiro ekutora mifananidzo yedhijitari, zvemagetsi zvevatengi, webhu, software yemagariro, kubatana kutaurirana, dijitari neInternet-yakavakirwa terevhizheni uye nharembozha zvese zvinosvika pakakomba mapoinzi anounza vhidhiyo munzvimbo huru. Mumakore matatu anotevera Gartner anotenda kuti vhidhiyo ichave yakajairika mhando yemhando uye yekudyidzana modhi yevazhinji vashandisi, uye na2013, inopfuura makumi maviri neshanu muzana yezvinyorwa zvinoonekwa nevashandi pazuva zvichazadzwa nemifananidzo, vhidhiyo kana odhiyo.
Inotevera Generation Analytics - Kuwedzera komputa kugona kwemakomputa anosanganisira nharembozha pamwe nekuvandudza kubatana kuri kugonesa shanduko mumabhizinesi anotsigira sarudzo dzekushanda. Izvo zvave kugona kumhanyisa simulation kana mamodheru kufanotaura zvichaitika mune ramangwana, pane kungo dzorera kumashure data rinotarisana nezve kudyidzana kwakapfuura, uye kuita izvi fungidziro mune chaiyo-nguva kutsigira yega bhizinesi chiito. Kunyangwe izvi zvingangoda shanduko dzakakosha kune aripo ekushanda uye bhizinesi huchenjeri zvivakwa, mukana uripo wekuvhura kwakakosha kuvandudza mune bhizinesi mhedzisiro uye mamwe mabudiro emitengo.
Zvemagariro Ongororo - Zvemagariro analytics inotsanangura maitiro ekuyera, kuongorora uye kududzira mhedzisiro yekudyidzana uye kushamwaridzana pakati pevanhu, misoro uye mazano. Uku kudyidzana kunogona kuitika pane zvemagariro software zvinoshandiswa munzvimbo yebasa, mukati kana kunze zvakatarisana nenharaunda kana padandemutande rewebhu. Zvemagariro analytics izwi remuraira rinosanganisira akati wandei ehunyanzvi hwekuongorora senge kusefa munharaunda, kuongorora pasocial-network, kuongorora manzwiro uye zvemagariro analytics. Zvemagariro network ongororo maturusi anobatsira kuongorora magariro uye kudyidzana pamwe nemabatiro ehunhu, mapoka kana masangano. Yemagariro network ongororo inosanganisira kutora data kubva kune akawanda masosi, kuratidza hukama, uye kuongorora kukanganisa, hunhu kana kugona kwehukama.
Context-Kuziva Komputa - Context-inoziva komputa nzvimbo pane iyo pfungwa yekushandisa ruzivo nezve wekupedzisira mushandisi kana chinhu chinhu nharaunda, zviitiko kubatana uye zvido zvekuvandudza kunaka kwekudyidzana neuyo wekupedzisira mushandisi. Mushandisi wekupedzisira anogona kunge ari mutengi, bhizinesi shamwari kana mushandi. Sisitimu inoziva mamiriro inotarisira zvinodiwa nemushandisi uye zvine mutsigo inosvitsa zvirimo zvakafanira uye zvakagadziriswa, chigadzirwa kana sevhisi. Gartner anofungidzira kuti panosvika gore ra2013, inopfuura hafu yemakambani eFortune 500 achange aine maratidziro emakomputa-anoziva uye na2016, chetatu chekushambadzira kwevatengi venharembozha chichava chechimiro-chekuziva.
Kuchengetedza Kirasi Yekurangarira - Gartner anoona kushandiswa kukuru kweyekupenya memory mumidziyo yevatengi, zvishandiso zvevaraidzo uye mamwe akasimbirwa masisitimu eIT. Inopawo nhete nyowani yekuchengetedza hutongi mumaseva nemakomputa emakomputa ane zvakakosha - nzvimbo, kupisa, mashandiro uye kuomarara pakati pavo. Kusiyana ne RAM, ndangariro huru mumaseva nemaPC, flash memory inopfuurira kunyangwe simba rikabviswa. Nenzira iyoyo, inotaridzika kunge madhiraivha dhisiki uko kunoiswa ruzivo uye inofanirwa kurarama simba-pasi uye kutanga zvekare. Tichifunga nezve mutengo wepamberi, kungovaka solid state disk dhiraivha kubva kuflash kunosunga iyo yakakosha nzvimbo pane rese data mufaira kana vhoriyamu izere, nepo nyowani yakatsanangurwa yakajeka dura, isiri chikamu chefaira system, inobvumidza yakanangwa kuiswa kweiyo chete yakakwira-yekuwedzera zvinhu zveruzivo izvo zvinofanirwa kuona musanganiswa wekuita uye kushingirira kunowanikwa ne flash memory.
Ubiquitous Komputa - Basa raMark Weiser nevamwe vaongorori veXerox's PARC rinopa mufananidzo wekuuya kwechitatu wave wecomputer uko makomputa akavezwa akaiswa mukati menyika. Sezvo makomputa ari kuwanda uye zvinhu zvezuva nezuva zvichipihwa kugona kutaura nematagi eRFID nevateveri vavo, netiweki dzinosvika nekupfuura chiyero chinogona kutarisirwa nenzira dzechinyakare. Izvi zvinotungamira kune yakakosha maitiro eiyo embuing komputa masystem mune anoshanda tekinoroji, ingave inoitwa sekunyaradza tekinoroji kana zvakajeka kutarisirwa uye kusanganiswa neIT. Pamusoro pezvo, inotipa nhungamiro yakakosha pane zvatinotarisira nekuwedzera zvigadzirwa zvemunhu, mhedzisiro yekushomeka pazvisarudzo zveIT, uye kugona kwakakodzera kunozoendeswa nekumanikidzwa kwekukwira kwemitengo muhuwandu hwemakomputa emunhu mumwe nemumwe.
Mucheka-Yakavakirwa Zvivakwa uye Makomputa - Komboni-yakavakirwa komputa ndeye modular fomu yekomputa uko sisitimu inogona kuunganidzwa kubva kune akapatsanurwa ekuvaka-block module akabatanidzwa pamusoro pejira kana switch backplane. Mune fomu yayo yekutanga, machira-akavakirwa komputa ane yakasarudzika processor, ndangariro, I / O, uye anodonhedza ma module (GPU, NPU, nezvimwewo) zvakabatana neyakagadziriswa kubatana uye, zvakakosha, software inodiwa kugadzirisa uye kugadzirisa iyo inoguma sisitimu (s). Iyo machira-based infrastructure (FBI) modhi inoratidzira zviwanikwa zvepanyama - processor cores, network bandwidth uye zvinongedzo uye kuchengetedza - mumadziva ezve zviwanikwa anotarisirwa neFabric Resource Pool Manager (FRPM), mashandiro esoftware. Iyo FRPM inotungamirwa neiyo Yechokwadi Nguva Yezvivakwa (RTI) Service Gavhuna software chikamu. FBI inogona kupihwa nemutengesi mumwe chete kana neboka revatengesi vanoshanda pamwe chete, kana nemubatanidzwa - wemukati kana wekunze.
Ndiwo Anoshamisa Kwazvo Zeitgeist wegore